Mihazakazaka ny fotoana. Noho izay indrindra, dia efa miroso amin’ny fikarakarana atrikasa amin’ireo renivohi-paritany lehibe eto Madagasikara amin’ny fanentanana sy fampianarana mifidy ny eo anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Ceni, amin’izao …Tohiny
Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena : Tsy hisy ny taona fotsy
Manoloana ny ahiahian’ireo Ray aman-dreny amin’ny mety hisian’ny taona fotsy amin’ity taona ity, dia mbola nanamafy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Horace Gatien fa tsy hisy ny taona fotsy ary hatao amin’ny daty voatondro ny fanadinam-panjakana. …Tohiny
Fiparitahana zava-mahadomelina : Kamio iray nanipy rongony 2 gony
Rongony miisa manodidina ny roa gony sy tapany milanja 30 kilao no saron’ny mpitandro filaminana miasa ao Alasora. Ny sabotsy 7 jolay lasa teo no nahatratrarana ireo zava-mahadomelina ireo, teny Ambohimanambola. Raha ny fampitam-baovao avy …Tohiny
Maro no talanjona. Nanambara tamina onjam-peo tsy miankina iray ny depiote avy amin’ny antoko Mapar, Naivo Raholdina, fa tsy misy mahazo miditra ao amin’ny biraon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany ny olona rehetra tsy manana anton’asa sy tsy …Tohiny